एमबीए किन पढ्ने ? | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा एमबीए किन पढ्ने ?
शिक्षा 248 views
कुशल व्यवस्थापकको बजार मागका कारण एमबीए (माष्टर्स अफ बिजनेश एड्मिनिष्ट्रेशन) रुचिको विषय बन्दै आएको छ । एमबीए अध्ययनपछि विभिन्न उद्योग तथा कार्यालयमा व्यवस्थापकका रूपमा काम गर्न पाइने भएपछि यसप्रति विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन् । एमबीएले नेपालका सयौं विश्वव्यापारका बारेमा जानकारी दिने भएकाले कर्पोरेट क्षेत्रका लागि दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालमा पहिलोपटक काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले सन् १९९३ मा यो विषयको अध्यापन शुरू गरेको थियो । नेपालका व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा खट्किएको कुशल व्यवस्थापकको अभाव पूरा गर्ने उपयुक्त विकल्पका रूपमा एमबीए कोर्सको विकास गरिएको छ । अन्य सङ्काय तथा व्यवस्थापन सङ्कायभित्रै पनि अन्य विषयको तुलनामा स्नातकोत्तर तहमा एमबीए अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा पर्दै आएको छ । विद्यार्थीको आकर्षण र बजारको माग बढ्दै जाँदा नेपालका मात्र नभई विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पनि कलेजहरूले एमबीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् । मागको तुलनामा एमबीए कलेजहरू कम भएको गुनासो पनि आइरहेको छ । तर, एमबीए जनशक्तिको बजार माग अनुपातमा कलेजको अहिलेको उत्पादन पर्याप्त भएको सम्बन्धित क्षेत्रका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा बढ्दो माग
पछिल्लो समय व्यावसायिक क्षेत्रमा एमबीए अध्ययन अनिवार्य हुन थालेको छ । यसमा उच्च आकर्षण देखिए तापनि बजारको मागअनुसार एमबीए गरेका जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । एमबीए आधुनिक शिक्षा मात्र नभएर रोजगारी सृजना गर्ने माध्यम पनि बनेको छ । शैक्षिक हिसाबले स्नातकोत्तर तहमा एमबीएस, एमए, एमएडलगायत कोर्स पनि उपयुक्त छन् । तर, व्यावसायिक रूपमा एमबीए र ईएमबीए कोर्सलाई आर्थिक आत्मनिर्भरताको कोणबाट महत्त्वपूर्ण मान्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ । व्यावसायिक होस् वा व्यक्तिगत व्यवस्थापन, यी कोर्सले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
विशिष्टीकृत एमबीएको अवधारणा
हाल नेपालका अधिकांश कलेजले विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा कर्पोरेट हाउसलक्षित एमबीए कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, बजारको मागअनुसार एमबीए कोर्सलाई पनि विभिन्न क्षेत्रमा फैलाउनुपर्ने एमबीए कलेजका सञ्चालकहरूको बुझाइ छ । बजारको मागअनुसार हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, डेरीजस्ता क्षेत्रमा पनि एमबीए कार्यक्रम फैलाउने तयारीमा केही कलेज छन् । नेपालको हाइड्रो र पर्यटन व्यवस्थापनमा तत्काल यस्तो कोर्सको आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
तर, दक्ष प्राध्यापकको कमी पनि छ
वर्षेनि एमबीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको सङ्ख्या बढेपछि सो विषय पढाउने दक्ष र अनुभवी प्राध्यापकको अभाव हुन थालेको छ । पछिल्लो समय ‘च्याउ उम्रिएसरी’ एमबीए कलेज खुल्नाले नयाँ कलेजले दक्ष र अनुभवी प्राध्यापक पाउन कठिन भएको बताइन्छ । एमबीए अध्यापनका लागि शैक्षिक योग्यता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले, सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावहारिक ज्ञान एवम् विशेषज्ञता हासिल गरेका र दक्ष प्राध्यापकको भने अभाव देखिएको कलेजहरूले बताएका छन् । कलेजहरूले प्राध्यापकको दक्षता अभिवृद्धिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा आयोजना हुने फ्याकल्टी डेभलपमेण्ट, विभिन्न तालीम, सेमिनारजस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरेका छन् । त्यस्तै, व्यावसायिक रूपमा सफल मानिएका उद्योगी–व्यवसायीलाई समेत अतिथि अध्यापक (गेष्ट लेक्चरर)का रूपमा कक्षामा ल्याउने गरेका छन् । यसबाट विद्यार्थीले व्यवसायीको अनुभव प्रत्यक्ष सुन्ने र बुझ्ने अवसर पाउँछन् ।